Photoluminescent master batch Mpanamboatra - China fotoluminescent master batch Suppliers & Factory
Photographerine Master Batch
Batch master master plastika. Ny plastika master plastika Luminescent dia karazana plastika plastika izay manana toetra mampiavaka azy. Amin'ny alàlan'ny tsindrona, ny fitrandrahana ary ny famoronana mitsoka, azonao atao ny mampiasa plastika plastika photoluminescent mivantana mba hanaovana vokatra plastika manjelatra.
Photoluminescent master batch -Plastic raw material auxiliary granule Glow in the masterbatch maizina Izahay dia hampiasa ny famirapiratra tsara indrindra amin'ny vovo-jiro marevaka ho anao hamokatra masterbatch marevaka, hazavana tsara. Hanorina fifandraisana tsara aminao izahay, ho an'ny vokatrao sy ny fitaovanao manokana, izay mety ho an'ny masterbatch. Izahay dia manao asa tsara aorian'ny serivisy varotra, ho an'ny asa famokarana manome torohevitra fohy sy fotoana mety. 1. Fotoana fohy fitehirizana fohy: 10-20 m ...
Fa maninona no misafidy Glow ao amin'ny masterbatch fa tsy ho bedy?
Ny halehiben'ny vovo-jiro miavaka dia avo kokoa, handamina izany raha afangaro mivantana amin'ny resin.
Masiaka foana izany mandritra ny fizotry ny tsindrona ka lasa mainty ny vokatra.
Masterbatch manana fampifanarahana tsara kokoa noho ny fampitana mitovy amin'ny vokatra manjelanjelatra manokana sy ny vokatra plasctic.
Ny vovoka amin'ny masterbatch maizina dia manana ny fanaparitahana sy ny fandokoana ny hery tsara kokoa.
Ny vovony manjelatra dia misy fihenan'ny rano avo be, raha ny masterbatch kosa dia mety mihena amin'ny fomba mahomby.
Mora kokoa raha kajy ny dosie, ny bouttbb dia endrika wihich dia mitovy amin'ny resin, izay afaka mampanantena ny fahazoana lanja.
7) Ny ha-tontolo iainana, ny fampiasana masterbatch dia afaka misoroka ny fandotoana vovoka, tsara ho an'ny fahasalaman'ny mpandraharaha.
Ny pellet plastika valin-tsolomaintsika dia natao ho an'ireo resina sasany toy ny PP, PE, ABS, PC, PVC sns. Ny salan'isa fenon-tsolom-bolam-bolo amin'ny plastika plastuminescent dia avy amin'ny 20% ka hatramin'ny 50%. Ny famirapiratra sy ny fotoana aorian'ny vokatra vita dia afaka manitsy ny tenanao amin'ny alàlan'ny fampidirana volona fanampiny ao amina sôkôla.